Maxaa Sababa Shubanka | shumis.net
Home » galmada » Maxaa Sababa Shubanka
Maxaa Sababa Shubanka
Shubanka waa xaalad saxara jilicsan oo joogta noqoto, caadi ahaan soconaysa dhowr maalmood oo inta badan joogsada bilaa dawo. shuban waxaa lala xiriiriyaa amaba keena infekshan, bakteeriyo iyo mararka qaarkood natiijo ka timid cuno lagu sumoobay. Marka uu xanuunka shubanku raago sida caadiga ah waxa ay ka dhalataa cudur ama xanuun ku dhaca mindhicirada.
Shubanka waa dhibaato ay la kulmaan dadka badankooda isla markaana keeni kara walwal iyo walaac. Faadlan la xariir dhaqtar sida ugu dhaqsiyaha badan, hadii aan la daweyn shubanka kaligii iskama joogsado.
Shuban waxaa sabbabi kara waxyaabo kala duwan, waxaa kamid ah:
Cudurada jermiska leh sida Infekshan bakteeriya iyo fayrus qaarkood
Xasaasiyad cuntada qaar
Dadka qaar waxay dareemaan shubanka kadib qalliin caloosha, taas oo keeni karta cunada oo si fudud ku marta dheefshiidka. Inta badan sabbabta uu shubanka ku yimaado lama garan karo oo way adag tahay in la ogaado.
Waxaa jira calaamado badan oo astaan u ah shubanka
Fuuqbax Iyo Shubanka
Shuban waxa uu sabbabi karaa fuuqbax taas oo ah in jirkaaga uu lumiyo biyaha, waxaa laga yaabaa in aad halis u gasho fuuqbaxa siyaadada ah hadii aan lala tacaalin oo aan la daweyn. Fuuqbaxa waxaa uu noqon kara mid culus oo xitaa keeni kara dhimasho caalamadaha fuuqbaxa waxaa ka mid ah:
Maqaarka oo qalala
Harraad siyaado ah
Kaadida oo yaraata
Afka oo qalayl noqoda
Garaaca wadnaha oo kor u kaca
Goortaad isku aragto caalamadaahan fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan ula xariir dhaqtarka.
Sidee Guriga loogu Dareyeeli Karaa
Malahan shubanka daryeel guri waxa kaliya oo uu leeyahay waa in qofka lala tacaalaa oo la gaarsiiyaa gacan dhaqtar iyadoo talaabooyinkaan la maraaya
Cabidda iyo cunnada oo la joogteeyo iyadoo 7 ilaa 8 koob la cabaayo, 3dii saac kastabana la cuno cunno yar
In laga fogaado caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyay amaba ay ku jiraan
Ku dadaal in gacmahaaga aad nadiifiso markasto oo aad xaajooto
Isticmaalan wax jilicsan amaba qoyan markaad gudanayso xaajadaad
Title: Maxaa Sababa Shubanka